“Waxaa nagu socda duqaymo culus!” – Hoggaanka TPLF oo sheegay inuu bilowday weerarka Maqalla | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka “Waxaa nagu socda duqaymo culus!” – Hoggaanka TPLF oo sheegay inuu bilowday...
“Waxaa nagu socda duqaymo culus!” – Hoggaanka TPLF oo sheegay inuu bilowday weerarka Maqalla
(Maqalla) 28 Nof 2020 – Waxaa si rasmi ah u bilowday wax lagu sheegay ‘wejiga ugu dambeeya” ee weerarka DF Itoobiya ee ka dhanka ah Maamulka Tigraay.
Debretsion Gebremichael, hoggaanka kooxda Tigray People’s Liberation Front (TPLF), ayaa Reuters farriin telegoon ugu sheegay in ay hadda wajahayaan “duqaymo aad u culus.”
Malcolm Web oo ah weriyaha Al Jazeera oo ku sugan Nairobi ayaa sheegaya in Maqalla oo ah caasimadda Tigraay oo ay ku dhaqan yihiin 500,000 oo qofi ay durba wajahayso duqaymo ka haysta dhanka woqooyi oo laga maqlayo “qaraxyo waawayn”, iyadoo laga cabsanayo dhibaato rayidka gaarta.
Billene Seyoum, Afhayeenka RW Itoobiya, ayaa sheegay in Ciidanka Itoobiya aanay “duqayn doonin” goobaha rayidka, isagoo intaa daba dhigay in “badbaadada rayidka Maqalla ay tahay muhiimaddooda koowaad”.
Tuuraha gantaal wadareedyada uu Ruushku sameeyo ee BM-21 GRAD 9K51 MLRS iyo hub kake, oo beryahanba la rigeeynayey, ayaa dul hoganaya meel aan ka fogayn caasimadda Maamul-goboleedka Tigraay ee Maqalla.
Previous articleNinkii dadka ku laayey masjid ku yaalla Quebec oo xukunkiisa la dhimay (Muslimiinta Canada oo ka xumaaday)
Next articleXarunta Maamulka Tigraay ee Maqalla oo gashay gacanta DF ee Itoobiya